Imbobo yokulayisha:Dalian, Qingdao, Tianjin, Shanghai, Ningbo, njll, ngokusho Isicelo Amakhasimende '.
Izingxenye Zomshini Ze-CNC Ezenziwe Ngokwezifiso
Ubuchwepheshe bokucubungula izingxenye zemishini busho inqubo yokushintsha ubukhulu noma izakhiwo zocezu lokusebenza ngesisetshenziswa esiwumshini.Ngokomehluko endleleni yokucubungula, ingahlukaniswa ngokusika nokucutshungulwa kwengcindezi.
Izindlela zokucubungula izingxenye zemishini ikakhulukazi zifaka: ukuphenduka, ukugaya, ukuhlela, ukufaka, ukugaya, ukubhola, ukubhora, ukubhoboza, ukusika nezinye izindlela.Kungase futhi kuhlanganise ukusika izintambo, ukuphonsa, ukubumba, i-electro-corrosion, ukucubungula impushana, i-electroplating, nokwelashwa kokushisa nokunye.
Kukhona umshini we-lathe oqondile kanye nomshini we-lathe ovundlile;imishini emisha inomshini we-CNC lathe, ikakhulukazi ukucubungula umzimba ojikelezayo;
Kukhona ukugaya okuqondile kanye nokugaya okuvundlile;imishini emisha inokugaya i-CNC, eyaziwa nangokuthi isikhungo semishini ye-CNC, ikakhulukazi icubungula indawo kanye nendawo yokuhlela.Vele, ingakwazi futhi ukucubungula i-camber ngezimbazo ezimbili noma izimbazo ezintathu ze-CNC Machining Center.
Ikakhulukazi indawo yohlelo lomumo wendawo.Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, ubuhwaba obungaphezulu abukho ngaphezu komshini wokugaya;
Ingaqondwa njengeplanethi eqondile, elungele ukucutshungulwa kwe-arc eyindilinga engaphelele.
Kukhona ukugaya indiza, ukugaya okuyisiyingi, ukugaya imbobo yangaphakathi, nokugaya ithuluzi, njll. Ukucubungula okuphezulu kokunemba kwendawo, ubulukhuni bendawo yokusebenza buphezulu kakhulu;
Ngokuvamile, ukucutshungulwa kwezimbobo.
Ngokuyinhloko iyimbobo eyisicefe ngokusebenzisa amathuluzi ayisicefe noma i-blade, kanye nokucutshungulwa kobubanzi obukhulu, imbobo enembayo ephezulu, kanye nesimo esikhulu socezu lokusebenza.
Ngokuyinhloko ibhoboza ukubumba ngomshini wokubhoboza, ongabhoboza imbobo eyindilinga noma emise okukhethekile.
9. Ukusika nokusaha:
Ngokuyinhloko iwukusika impahla ngomshini wokusaha, ovame ukusetshenziswa enqubweni yokuvala.
Noma yimuphi umshini wakhiwe izingxenye eziningi ezinembile, ngaphandle kwezingxenye zemishini, umshini awuphelele.Yingakho izingxenye zomshini zidlala indima ebaluleke kakhulu ezimbonini zemishini.
Ngokuthuthukiswa kwe-automation, ubuchwepheshe bokucutshungulwa komshini sebuye baqala ukwenza ngokuzenzakalelayo isiqondiso sokuziphendukela kwemvelo okuqhubekayo, kufanele kube nendima ebalulekile ekuthuthukiseni umphakathi wesikhathi esizayo, uyazi, amandla enqubo yemishini ukuthuthukiswa komnotho wezwe.Kwa-BMT, sisebenzisa ubuchwepheshe kahle kakhulu, ukuze sinikeze amakhasimende ethu izingxenye zemishini ezihamba phambili.Uma kukhona okudingekayo, sicela usithinte ngokushesha.
I-plate tube 1
I-plate tube 2
Eminye Imikhiqizo Esiyenzile
Okwedlule: Izingxenye Zensimbi ze-CNC
Olandelayo: Imibuzo Yangempela Ye-CNC Machining Processing
Izindlela Zokuthola Uguquko Nokuthuthukisa 3
Ukucaciswa Kwenqubo Yomshini
Izinhlobo ze-CNC Machining
I-Axis High Precision CNC Machining Izingxenye
Ukwenza imishini, Cnc Titanium Machining, Custom Machining, Precision Machining Izingxenye, Precision Machining, Izingxenye Zensimbi Zeshidi Eliphezulu Ezenziwe Ngokwezifiso,